NK | पहिलो माया
सम्बन्ध मा ठुला ठुला पर्खाल हुदा रहेछन् । उनले मलाई सारै माया गरेका अनुभव पनि छ । किनकि उ र म धेरै समय लभ रिलेशन मा बसेका थियौ ।उसको र मेरो चिनजान चाहिँ फेसबुक बाट भएको थियो । उ सग बोल्दा मेरो मन मा विभिन्न फिलिन्स हरू आउने गर्थ्यो । उसग म खासै बोल्दैन थिए ।
तिमीले छर्कीएको आलो घाउमा नुनचुक बाकी छ,
आउँछ कि अझै त्यो निष्ठुरी भनी ढुकढुक बाकी छ ।
अन्तिम सास सम्म पर्खेर बसेको छु माया उति कै ,
हाम्रो नाम लेखिएको तर सुकेको बुढोरुख बाकी छ।
उ र म सगै एउटै ठाउँमा काम गर्ने गर्दथ्यौ ।उ पनि म सग खासै बोल्दैन थिई ।म एकदमै सोजो भएको कारणले गर्दा उ सग नजिक भएर बोल्दैन थिए । उ सग राति जति बजेसम्म फेसबुकमा च्याटिन्ग हुन्थ्यो । उ मेरी प्रेमिका भइ सकेकी थिई ।उ एकदमै चाडै रिसाउने गर्थि ।कसैले केही नराम्रो भन्नू हुन्थेन चाडैं रिसाउने सोभाबको को कारणकि थिइ । उ र म एकदमै कम बोल्ने गर्थ्यौ । हाम्रो चाहिँ फोन मा लगातार कुरा हुन्थ्यो । मेरो चाहिँ पहिलो लभमा नि हाम्रो टु लभ थियो।
जिन्दगीमा कहिल्यै हरेश खानु हुदैन ।
मिलन र बिछोड हुदैमा छाडेर जानू हुदैन ।
प्रेमिका सग जति ठुलो झगडा गरेनि ।
टिकाउनु पर्छ सम्बन्ध कहिल्यै रूनु हुदैनन् ।
उ अलिकति रिसाउदा मलाई उ सग केही बोल्न मन लाग्थेन । किनकि उ जिद्दी पना कि थिइ । केही कहिना चाहिँ हाम्रो लभ मा कुनै शत्रु आएर बसेन ।उ पनि म रिसाउदा कस्ती हुन्थि । मेरो मनमा उ बाहेक कसैको नाम पनि थिएन । उसको चाहिँ को थियो मलाई चाहिँ थाहा थिएन ।उसलाइ मैले दिन दिनै फोन गर्दथे । उ थिइ नै उस्तै आफुले भनेको जे पनि हुनुपर्छ भन्नि ,उ बोलेको मलाई एकदमै मन पर्थो र उ बोलेको चाहिँ कल रेकर्ड गरेर सुन्थे उसको याद त मलाई सारै नै आउथ्यो।
हरेक पल मन मुटुमा “छाउछु” भने मान्छे!!
सपनी मा पनी मेरै गाउँ धाउँछु भने मान्छे!!
खै कसरी परिवर्तन भयो होला आज आई;
कसम तिम्रो चोखो माया “लाउँछु” मान्छे!!
जिवनका सङ्धष हरू बढ्दै गयो ।उसले सधैं एउटै कुरो म माथि टक्राउने गर्दथि र्मैले त छाडि दिन्छु तपाईं चाहिँ अर्कै केटि खोज्दै गर्नु म यति भन्दैमा आखा बाट आसु भार्ने गर्थें । म रोएको उसले कहाँ हेर्न सक्दथि र उसले हर्षित हुदै भन्नि गर्दथि यति भन्दा पनि रूनु पर्छ र पागल ।मैले पनि त्यही जबाज मा भन्ने गर्दथ्ये मलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन भन्नि थाहा छ त तिमलाइ । मैले यस्ता कुरा हरू सहन सक्दैन्थे। र मैले सबैकुरा उसलाई सेयर गर्ने गर्दथे उसले पनि उ मेरो मान्छे हो भनेर सेयर गर्दथि ।
मुटुभरी~तिम्रै छ माया ,बताउ म कसरी,
सास बनी ढड्कनमा छोै,हटाउ म कसरी
भनी हाले हुन्थ्यो के छ ? बरु त्यो मनमा
एको~होरो सोच मै हक जताउ म कसरी
उसले मलाई जीवन भर साथ दिन्छु भनेर कसम खाएकी थिए। उसले यी कुरामा पनि रूनु पर्छ र पागल भन्थी ।उसले पनि मलाई बिश्वास दिलाएकी थिए। उसको बारेमा कसैले नराम्रो भनेमा झगडा गर्दथे । उसले भन्दथी तपाईंको यो सन्सारमा म बाहेक को छ र ।
पढेेर प्रतिक्रिया दिनुहोस्